Ndi cha cha na ntaneti - Ulo eji eme ulo gi - Dafne Italian Design
Home shop ọkụ Chandeliers
Home / shop / ọkụ / Chandeliers
Ngosipụta 1-50 nke nsonaazụ 156
Okpokoro ụlọ nke a na - eji akwụkwọ - 70 x 25 x 28h - (DFL)
Eji mma na ọla kọpa epupụta - cm. L40 x 58h - (DFL)
chandelier atọ-ìhè - agba ọla kọpa - dakọtara na bọlbụ klas; A, A +, A ++ - ihe: iron - (STL)
Elu ụlọ oriọna mma na epupụta - cm. 50 x 20 x 50h - (DFL)
Chandelier na-acha ọcha ntụgidere eriri - (UL)
okpokoro oriọna na kristal - Dita 50 cm. - Style: Omuma - Kwadoro na klas nkpuchi; A, A +, A ++ - (DFL)
Chandelier - Ụlọ okpukpu oge Chandelier - Ime ụlọ Chandelier Kwesịrị Ekwesị maka ntinye ụlọ - Ọnwa ise - Bulbs Not Included - Compatible with Class A, A +, A ++ (STL) Bulbs
201€ Aggiungi al carrello
Chandelier mma na acha epupụta - cm. 65 x 100 x 65h - (DFL)
Ihe eji eme ihe na ebe obibi ya - Na-ejikọta na klas ụlọ; A, A +, A ++ - (UL)
Okpokoro chara chaa chaa chara - Na-ejikọta na klaasị klas; A, A +, A ++ - (UL)
Onyinye chal na-acha ọcha na ọkụ 5 - Kwekọrọ na klas klas; A, A +, A ++ - (UL)